Ndị Kọlọsị 3 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Kọlọsị 3:1-25
3 Ma, ọ bụrụ na a kpọlitere+ unu na Kraịst, na-achọnụ ihe ndị dị n’elu,+ bụ́ ebe Kraịst nọ ọdụ n’aka nri nke Chineke.+ 2 Na-atụkwasịnụ uche n’ihe ndị dị n’elu,+ ọ bụghị n’ihe ndị dị n’elu ụwa.+ 3 N’ihi na unu nwụrụ,+ e zobewokwa ndụ+ unu n’ebe Kraịst nọ dị ka uche Chineke si dị.+ 4 Mgbe a ga-eme ka Kraịst, bụ́ ndụ anyị,+ pụta ìhè, mgbe ahụ ka a ga-emekwa ka unu na ya pụta ìhè+ n’ebube.+ 5 Ya mere, meenụ ka akụkụ ahụ́ unu+ ndị dị n’elu ụwa nwụọ+ n’ihe banyere ịkwa iko, adịghị ọcha, agụụ mmekọahụ,+ ọchịchọ ọjọọ, na anyaukwu,+ nke bụ́ ikpere arụsị. 6 Ọ bụ n’ihi ihe ndị ahụ ka ọnụma Chineke ji abịa.+ 7 Unu jere ije n’ihe ndị ahụ n’oge gara aga, mgbe unu biri ndụ n’ime ha.+ 8 Ma ugbu a, wepụnụ ha niile n’ebe unu nọ,+ ya bụ, ọnụma, iwe, ihe ọjọọ, okwu mkparị,+ wepụkwanụ okwu rụrụ arụ+ n’ọnụ unu. 9 Unu adịla na-aghara ibe unu ụgha.+ Yipụnụ mmadụ ochie+ ahụ na omume ya, 10 ma yirinụ mmadụ ọhụrụ ahụ,+ nke a na-esite n’ezi ihe ọmụma na-eme ka ọ dị ọhụrụ dị ka onyinyo+ nke Onye ahụ kere ya si dị. 11 Na nke a, enweghị onye Grik ma ọ bụ onye Juu, ibi úgwù ma ọ bụ ebighị úgwù, onye mba ọzọ, onye Sitia, ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya,+ kama Kraịst bụ ihe niile, nọrọkwa n’ime mmadụ niile.+ 12 Ya mere, dị ka ndị Chineke họọrọ,+ ndị dị nsọ a hụrụ n’anya, yirinụ obi ọmịiko,+ obiọma, ịdị umeala n’obi,+ ịdị nwayọọ,+ na ogologo ntachi obi,+ dị ka uwe. 13 Na-ediri ibe unu ihe ma na-agbaghara ibe unu kpamkpam+ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe mere ọ ga-eji mee mkpesa+ megide ibe ya. Ọbụna dị ka Jehova gbaghaara unu kpamkpam,+ na-emekwanụ otú ahụ. 14 Ma, e wezụga ihe ndị a niile, yirinụ ịhụnanya+ dị ka uwe, n’ihi na ọ bụ ihe nkekọ zuru okè+ nke ịdị n’otu. 15 Kwenụ ka udo+ nke Kraịst na-achịkwa obi unu,+ n’ihi na, n’eziokwu, ọ bụ na ya ka a kpọrọ unu n’otu ahụ́.+ Gosikwanụ na unu bụ ndị nwere ekele. 16 Kwenụ ka okwu nke Kraịst biri n’ime unu n’ụba, ka o meekwa ka unu nwee amamihe niile.+ Jirinụ abụ ọma+ na otuto a na-enye Chineke na abụ ime mmụọ+ na amara na-ezi ibe unu ihe,+ na-adụkwa ibe unu ọdụ, na-abụkunụ Jehova abụ n’ime obi unu.+ 17 Ihe ọ bụla unu na-eme, n’okwu ọnụ ma ọ bụ n’ọrụ,+ na-emenụ ihe niile n’aha Onyenwe anyị Jizọs,+ na-ekele+ Chineke bụ́ Nna site n’aka ya. 18 Unu ndị bụ́ nwunye, na-edonụ onwe unu n’okpuru+ di unu, dị ka o kwesịrị ekwesị n’ime Onyenwe anyị. 19 Unu ndị bụ́ di, na-ahụnụ nwunye unu n’anya,+ unu ewesola ha oké iwe.+ 20 Unu ndị bụ́ ụmụ, na-eruberenụ ndị mụrụ unu isi+ n’ihe niile, n’ihi na nke a na-atọ Onyenwe anyị ụtọ. 21 Unu ndị bụ́ nna, unu adịla na-akpasu ụmụ unu iwe,+ ka ha wee ghara ịda mbà n’obi. 22 Unu ndị bụ́ ohu, na-eruberenụ ndị bụ́ nna ukwu unu n’ụwa isi n’ihe niile,+ ọ bụghị naanị mgbe a na-ele unu anya, dị ka ndị na-eme ihe na-atọ ndị mmadụ ụtọ,+ kama jirinụ ezi obi na egwu Jehova na-eme ya.+ 23 Ihe ọ bụla unu na-eme, jirinụ mkpụrụ obi dum na-eme ya+ dị ka ọ̀ bụ Jehova+ ka unu na-emere ya, ọ bụghị ndị mmadụ, 24 n’ihi na unu maara na ọ bụ site n’aka Jehova+ ka unu ga-anata ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị nke bụ́ ihe nketa ahụ.+ Bụrụnụ ohu nke Nna Ukwu ahụ, bụ́ Kraịst.+ 25 N’ezie, onye na-eme ihe ọjọọ ga-anata ụgwọ+ ihe ọjọọ o mere, a gaghị ele mmadụ anya n’ihu.+
Ndị Kọlọsị 3